- नेपाली कन्सल्टेन्सीले अनुमानको भरमा जापानमा बिद्यार्थी पठाउनु गलतः कोजी कानाजावा
नेपाली कन्सल्टेन्सीले अनुमानको भरमा जापानमा बिद्यार्थी पठाउनु गलतः कोजी कानाजावा
पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीहरु जापानमा अध्ययन गर्न जाने क्रम वढेको छ । नेपाली बिद्यार्थी अध्ययन गर्न जाने देशहरुका रोजाइमा जापान पर्दै आएको छ । विकशित र आफैमा सम्पन्नशाली मुलुक जापान नेपाली विद्यार्थीको रोजाईमा पर्नु स्वाभाविक पनि हो । प्रत्येक वर्ष हजारौंको संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरु जापान अध्ययनको लागि जाने गरेका छन् । अधिकांश नेपाली विद्यार्थीहरुले जापानमा अध्ययनको साथै खाली समयमा रोजगारी गरेर आफ्नो आर्थिक अवस्थामा पनि राम्रो प्रगती गरेको देखिन्छ । जापानमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरुले कसरी जापानमा राम्रो अध्ययनका साथै फुर्सदको समयमा काम गरेर कसरी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
। जापान नेपाली विद्यार्थीको लागि कस्तो वातावरण छ ? कस्ता विद्यालय र कलेजहरु छनोट गर्नु राम्रो हुन्छ ? जापान जानुपूर्व नेपालमै पनि कसरी के कस्ता तयारीहरु गर्नु पर्दछ भन्ने विषयलाई लिएर नेपाली विद्यार्थी लिन काठमाडौंमा रहेको भ्याली कन्सल्टेन्सीमा जापानको सिमोन गाकोबाट आएका आरु मेडिकल केयर एण्ड व्लेलफयर सेन्टरका डाइरेक्टर कोजी कानाजावा र प्रमुख टाडायोस्ही किनोस्थासँग कुराकानी गरेका छौं । भ्याली कन्सल्टेन्सीका डाइरेक्टर बिमल ज्ञवालीको सहयोगमा नेपाल ताराका लागि रमेश थापा र सुदर्शन आचार्यले गरेको कुराकानी ।
तपाईहरु नेपालमा आउनुको मुख्य उद्देश्य के हो ?
हामी जापानमा अध्ययनको लागि प्रकृया पुरा गरेर जान इच्छुक विद्यार्थीहरुलाई लिन आएका हौं । हामीले प्रत्येक वर्ष नेपालबाट २ सेसन, पहिलो अक्टुबर र दोस्रो अप्रिलमा विद्यार्थीहरु लिन्छौं । यहि शिलशिलमा हामी नेपाल आएका छौं । पहिला पनि हामीले नेपालबाट विद्यार्थीहरु लिएका थियौं त्यसैले यो पटक पनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै नेपाली विद्यार्थीहरुलाई जापनमा लैजाने र राम्रो शिक्षा दिने हो । नेपाली विद्यार्थीले जापनमा कत्तिको राम्रो गरेको पाउँनुभएको छ रु जापनमा खास गरि भोकेशनल कलेजहरुमा अध्ययन गर्ने गर्दछन् । खास गरि हाम्रो विद्यालयमा मेडिशिन, आइटि, केयरगिभर, विजनेश म्यानेजमेन्ट आदि पढाई हुने गर्दछ । नेपाली विद्यार्थीहरुले लगनशिलता, मिहनत, आपशी सहयोग र सद्भावले गर्दा हामीले नेपाली विद्यार्थीहरु लिने गरेका छौं । हाम्रो विद्यालयमा बिभिन्न देशका विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्न आउछन् तर नेपाली विद्यार्थीहरुमा जती मेहनत र लगनशिलता अरु विद्यार्थीमा पाईदैन त्यसैले हामीले नेपाली विद्यार्थीलाई वढी जोड दिने गर्दछौं । हामीले मात्र होईन अन्य विद्यालयले पनि नेपाली विद्यार्थीहरुलाई वढी प्रथमिकतामा राख्ने गर्दछन् ।
बिभिन्न समयमा विद्यार्थीहरु विदेश अध्ययनको शिलशिलामा समस्याहरु आएको भन्ने सुन्नमा पाइन्छ । के जापनमा पनि विद्यालयहरुले यसरी विद्यार्थीलाई दुःख दिने गरिन्छ त ?
यो समस्या सबै देशमा छ । हाम्रो देश जापानमा पनि यस्ता समस्या छैनन् भनेर भन्न सकिदैन तर भेरै कम छन् । जापनमा नीति नियमहरु कडा छन् तर पनि विभिन्न समयमा समस्या देखिएको पक्कै हो । केहि केहि विद्यालयहले विद्यार्थीलाई समस्यामा पारेको सुनिन्छ पक्कै पनि यो एकतर्फि हुँदैन । नेपाली कन्सल्टेन्सीहरुले अनुमानको भरमा जापानमा बिद्यार्थी पठाउनु हुँदैन । नेपालमा जापान अध्ययन गर्न पठाउने बिभिन्न कन्सल्टेन्सीहरु खराव छन् त्यस्तै जापानमा पनि छैनन् भन्न सकिदैन । धेरै पैसा लिने, विद्यार्थीलाई गुणस्तरिय शिक्षा दिने भन्दा पैसामा वढी विश्वास गर्ने, विद्यार्थीको केयर नगर्ने गर्दछन् त्यसैले बिभिन्न समयमा समस्याहरु देखा परेका छन् त्यसलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । नेपालमा रहेका जापान पठाउने कन्सल्टेन्सीहरुले अनावश्यक कुराहरु बताईदिने, त्यहाँ गएर काम गर्ने हो, कलेजमा उपस्थिती भएमात्र हुन्छ भन्ने अवाहक फैलाएर भ्रममा पर्ने गर्दछ् यसले पनि समस्या परेको देखिन्छ । विद्यार्थीहरु पनि १८–२० घण्टा काम गर्ने अनि विद्यालयमा आएर पढ्न नसक्ने जस्ता समस्या देखिएको छ । त्यस्ता विद्यार्थीलाइ जापनका केहि विद्यालयहरुले केयर गर्न सकेका छैनन् त्यसले पनि समस्या निम्तिएको छ । नेपालमा पनि यसलाई कडाई गरिदिने र जापन अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले पनि राम्रोसँग बुझेर मात्र यो प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक छ । त्यसैले विद्यार्थीले पनि राम्रो कन्सल्टेन्सी, कम पैसा र जापानमा आफु जाने कलेजको बारेमा राम्रोसँग बुझेर जानु आवश्य छ ।
नेपाली विद्यार्थीले जापनमा अध्ययन गर्न जादा कसरी छुट्याउने कुन विद्यालय राम्रो हो नराम्रो हो भने र ?
नेपालबाट जाने विद्यार्थी कुनचाहीँ विद्यालय राम्रो र कुनचाहीँ नराम्रो भनेर छुट्यान धेरै गाह्रो हुन्छ । हमाीले कुन स्कुल राम्रो र कुन स्कुल राम्रो नराम्रो भनेर भन्न पनि सक्दैनौं । विद्यालयको कति समयदेखि संचालनमा आएको छ । कसरी संचालन भएको छ भन्ने मापण्दनै हेर्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ नयाँ कम्पनीहरु केहि क्षणका लागि देखाउँन खोज्दछन् । जुन विद्यालयहरु वढिी समयसम्म टिकेका छन् विद्यार्थीहरुले कस्तो सेवा र सुबिधा सहित अध्ययन गरेका छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालका कन्सल्टेन्सीहरुले पनि सजिलै छुट्याएका हुँदैनन् उनीहरुले जापानमा विद्यार्थीहरु कसरी धेरै पठाउने र धेरै पैसा आर्जन गर्ने भन्ने कुरामा तल्लिन हुन्छन् ।
खास गरि पुराना विद्यालय र नेपालमा रहेका जापान पठाउने पुराना कन्सल्टेन्सीहरुले केहि बुझेका हुन्छन् त्यसबाट केहि हदसम्म राम्रो विद्यालयमा अध्ययन गर्ने मौका पाउँछन् । खासगरि जापानमा ३ प्रकारका विद्यालयहरु छन् । दाइगाकु, सेम्मोनगाको र जापनिज ल्याङ्गवेज स्कुल । दाइगा, स्याम्वे गप्पामा जापनको शिक्षा मन्त्रलयको निगरानी हुन्छ । यिनीहरु सरकारी निगरानीमा हुने हुँदा यिनीहरु राम्रो हुन्छन् । सरकारले संरक्षण गरेको हुन्छ । यिनीहरुका बिभिन्न संगठनहरु हुन्छन् । अझ दाइगा त जापानको सरकारी विद्यालय हो । यो युनिभर्सिटीमा भएको जापानीज कोर्ष हो जुन पूर्ण सरकारी हो यसमा केहि समस्या हुँदैन । अर्को जापनिज ल्याङ्गवेज स्कुल छन् । यिनीहरु विश्वासको आधारमा मात्र जान सकिन्छ । यिनीहरुको त न तल ठाउँ छ नत माथी केवल विश्वासमा मात्र हुन्छ । जस्तो नेपालमा भाषा अध्ययन गराउने इन्सिच्यूटहरु छन् त्यस्तै हुन् जापनमा जापनिज ल्यावेज स्कुलहरु कुनै राम्रा पनि छन् कुनै नराम्रा पनि छन् । खास गरि सरकारी विद्यालयले प्रत्येक बर्ष ग्रेड छुट्याउने गर्दछ त्यो पनि नेपालबाट जाने विद्यार्थी बुझ्नु पर्दछ । नेपालका कन्सल्टेन्सीहरुले पनि जापानमा नै गएर विद्यालयहरुसँग राम्रो सहकार्य गरेर तिनीहरुको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु अध्ययन गरेर विद्यार्थीहरु पठाउनु आवश्यक छ ।
उसो भए तपाईहरुले नेपालबाट लैजाने विद्यार्थीहरु सफल हुन्छन् दुःख पाउँदैनन् भन्ने कुरामा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
पक्कै पनि हामी हाम्रो विद्यालयमा लैजाने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई उच्च प्रथमिकतामा राख्छौं, उनीहरुलाई राम्रो शिक्षाका साथ उज्जल भविष्य देखाउन प्रयत्न गर्दछौं । हामीले लैजाने विद्यार्थीले हाम्रो विद्यालयमा दुःख पाउने छैनन् र हामीले राम्रो बनाउँने प्रयत्नमा लाग्नेछौं ।
जापान जाने नेपाली विद्यार्थीलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
नेपाली विद्यार्थी इमान्दार छन्, असल छन् मेहनत गर्दछन् तर जापनमा धेरै जसो खान्जी भाषा बोल्ने गरिन्छ र यो भाषा अल्ली अफ्ठारो छ । चाइनिजहरुले यो भाषा राम्रोसँग बोल्न सक्दछन् तर नेपालीहरुलाई कठिन पर्दछ । जापनमा पनि ग्रेड सिस्टम हुन्छ त्यसको लागि भाषाको राम्रो ज्ञान हुनु आवश्य छ । नेपाली विद्यार्थीहरुले जापान जादाँ भाषालाई वढी ध्यान दिनु पर्दछ र भाषाको टोन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ यसलाई मिलाउन सक्नु पर्दछ । नेपालमा रहेका भाषा सिक्ने ठाउँहरुमा राम्रोसँग भाषा सिक्ने, जापानको बारेमा धेरै जानकारी लिन सकेमा धेरै सहज हुन्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त जापानमा आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउँछु, राम्रो अध्ययन गर्छु भन्ने नै हुन्छ त्यसको लगि राम्रो विद्यालय र त्यसको बारेमा पूर्ण रुपमा निपूर्ण हुनु आवश्यक रहन्छ ।